Ixesha kunye nabahlobo 34
Ziziphi iintlobo ezibalulekileyo phakathi kweTheosophy neNew Thinking?
Isizathu, iindlela kunye nenkcazo.
Lo mahluko awusekelwanga kwintetho nakwizenzo zababizi bezakwalizwi okanye kwabo bacinga izinto ezintsha, kodwa kwiincwadi zethiosophists nezo zeengcinga ezintsha. Uninzi lwamalungu ale mihla imibutho yezenkolo yenza amabango kwaye isebenze ngokungenangqondo njengenkoliso yabantu beNgcinga eNtsha. Iseti nganye yabantu ibonakalisa icala lomntu abasebenza ngalo ngelo xesha. Iimfundiso ze-Theosophy zezi: ikarma, umthetho wobulungisa; Ukuvela ngokutsha, ukukhula kwengqondo kunye nomcimbi womzimba kunye neminye imizimba ngokubuya kwengqondo ebomini kubomi bomzimba womntu kweli lizwe lomzimba; umgaqo-nkqubo ophindwe kasixhenxe ongumntu, imigaqo-nkqubo kunye nokuhlangana kwabo okungena kubuhlobo bomntu; amandla ogqibeleleyo omntu, okuba bonke abantu ngoothixo abanokubakho kwaye kusemandleni awo wonke umntu ukufikelela kwisimo esigqibeleleyo kwaye babe nesazela kunye nobukrelekrele boThixo omnye, uMqondo oManyanisiweyo; Ubuzalwana, ukuba onke amadoda avela kumthombo omnye wobuThixo kwaye onke amadoda ahlobene kwaye ayinto enye nangona ehluka ngokwenqanaba lokukhula, kwaye ngokomoya onke anoxanduva kwaye enxulumene omnye komnye njengamalungu osapho olunye, kwaye luxanduva lwamalungu alo ngalinye ukunceda nokuncedisa abanye ngokwamandla abo namandla abo.
Iinjongo ezivakalisiweyo okanye ezicetyiswayo kwiincwadi zeososophists kunye nakwababacingeli abahlukeneyo zahluke ngokupheleleyo. Iinjongo njengoko kubongozwa ziimfundiso ze-theosophical zezi: ukuthobela iimfuno zeKarma ngokuzalisekisa izibophelelo zomntu, oko kukuthi, umsebenzi, kuba ufunwa ngumthetho wobulungisa; okanye kuba ngokwenza njalo, umntu uya kwenza ikarma elungileyo; okanye kuba ilungile-apho kuya kusebenza khona uloyiko ngaphandle kwethemba lomvuzo. Ukungafiyo okanye imfezeko kujongelwa phambili kuyo ngenxa yokufumana kwayo umntu uya kubaleka uxanduva kwaye axhamle iziqhamo zayo, kodwa ngenxa yokufikelela kuyo, angcono akwazi ukunceda abanye ukuba boyise ukungazi, usizi kunye nosizi kwaye bafikelele kwinjongo enye. Iinjongo ezenza ukuba incasa entsha ukuba ithathe amanyathelo kuqala ibengcono kwakhe, ngokubanzi izibonelelo zomzimba, kunye nokonwabela oko, kwaye emva koko uxelele abanye ukuba nabo banokuba neminqweno yabo kule migca banelisekileyo.
Iindlela u-Theosophy acebisa ngazo ukuba zifunyanwe izinto zokwenza umsebenzi wakhe naphina apho ubekwa khona, ngokwenza, ngokungazingci ukuze kulungelwe abanye, ngokulawula iminqweno ngokwazi, ngokukhanyiselwa nangokuchitha ixesha elifanelekileyo lomntu, imali kunye nomsebenzi ukuze kusasazwe iimfundiso. Oku kwenziwa, ngaphandle kwemali okanye iindleko zoluhlobo. Iindlela zeNgcinga eNtsha kukuthembisa izibonelelo zomzimba kunye nokwaneliseka kwengqondo, kwaye imali ihlawuliswa ngezifundo zokufundisa kwingcinga kunye nokwenza isicelo esisebenzayo.
Omnye umahluko kukuba iimfundiso ze-Theosophy zichanekile, ngokomgaqo kunye nengxelo; kanti, kwiNtando eNtsha yamaZiko abantu amabango angaqondakaliyo enziwa, kunye nokusilela kwenkcazo ngokwemibandela kunye nefilosofi kubonisiwe kwiimfundiso. Iimfundiso eNtsha zokucinga zithetha ngobumnene, ukuba kunjalo, zekarma kunye nokuvela ngokutsha. Abanye bababhali babo bathetha ngemigaqo esixhenxe okanye eminye yayo; bayibambe le ndoda ingokaThixo imvelaphi kwaye iyinyani, kwaye bayakholelwa ukuba amadoda ngabantu abantakwabo. Kodwa kukho ukunqongophala kokucacileyo kuzo zonke ezi mfundiso zintsha zintsha zoPhawu oluphawulekileyo umahluko kwinkcazo ethe gabalala kunye nokunyanzeliswa okwenziwe kwiincwadi ze-theosophical.
Iimpawu ezahlukileyo ke zezi: ukuba isisusa esenza ukuba umlandeli we-Theosophy angazicingeli kwaye angabi nenkonzo kunye nenkonzo ngenjongo yokwazisa ngoThixo ngaphakathi, lo gama injongo ibangela incindi entsha ukuba isebenzise ulwazi olo analo ngesiqu sakhe kunye nengenelo. Iindlela zomsebenzi zomntu olandela i-Theosophy kukusasaza iimfundiso ngaphandle komvuzo; Ngelixa, le nduli intsha ithi umqeshwa ufanelekile ukuba aqeshiswe kwaye imali yona izibonelelo, okanye izibonelelo ezifungelweyo, ezinikezelweyo. Umlandeli we-Theosophy unezinto ezichaziweyo kunye neemfundiso ezizodwa ngokwazo, ngelixa ukunamathela kweNgcinga eNtsha kungangqinelani nemfundiso, kodwa unethemba kwaye unoyolo kwaye unethemba lokuba uya kuyifumana yonke iminqweno yakhe. Le yantlukwano ngokwemfundiso kunye neencwadi, kodwa le ibizwa ngokuba yiososophist ngumntu kwaye abuthathaka njengeglasi entsha; umntu ngamnye wenza ngokobunjani bakhe, ngaphandle kokuqiniseka okanye iinkolelo ezithile.
Apho i-Theosophy iqala khona iNgcinga eNtsha yokuphela. I-Theosophy iqala ngomsebenzi wakhe ebomini, kwaye ijolise ekufikeleleni kwimfezeko kwihlabathi elibonakalayo; kwaye ngalogqibeleleyo, ukugqibelela kwokomoya. Ingcinga entsha iqala ngokukholelwa nangokuzithemba kukukholelwa kubuThixo bakho, kwaye ibonakala iphela esiphatheni, ubutyebi, impumelelo kunye nolonwabo-ngamanye amaxesha kunye nexesha.
Yintoni ebangela umhlaza? Ingaba kukho nayiphi na impiliso eyaziwayo okanye ingabe enye indlela yokonyango kufuneka ifunyanwe ngaphambi kokunyangwa kwayo?
Kukho izizathu ezingxamisekileyo nezikude zomhlaza. Unobangela okhawulezileyo zezi zibangelwa bubomi bangoku. Oonobangela abakude basuka kwaye beza ngaphaya kwesenzo sengqondo ngengqondo yokuzalwa komntu kwangaphambi kokuzalwa. Ezona zinto zibangela ukubonakala komhlaza ziimpawu ezifana nokuqunjelwa sisisu okanye ukuqhubeka nokucaphukisa, okubangela isithintelo ekujikelezeni kwegazi, ukunyuka kwezicubu kwaye okubonelela ngomhlaba ofanelekileyo kuphuhliso lwento ekukholelwa ukuba sisifo somhlaza, okanye ngenxa yokutya okungalunganga okungafunekiyo emzimbeni okanye ekutyeni nakwisizathu sokuba intsholongwane yomhlaza ikhule, okanye eso sifo sinokubakho ngenxa yokuthintela, ukucinezela nokubulala, kodwa ukugcina emzimbeni weencindi ezibalulekileyo ngexesha lezesondo. . Ukubulala, ukugcina kunye nokuqokelelana emzimbeni weentsholongwane zobomi bolwelo oluxabisekileyo ngumhlaba ochumileyo obizwa ngokuba yintsholongwane yomhlaza; ngokuqhubeka nokuziqhelanisa umzimba wanda ngokukhula komhlaza. Kwakhona iimeko ezifanayo zinokubonakaliswa kukungakwazi komzimba ukuzisa iintsholongwane ezibaluleke kakhulu ekukhuleni, ukusilela ukwenza apho iintsholongwane zobomi ziyafa kwaye zibole kwaye zihlale emzimbeni ongakwaziyo ukuzenza okanye ukuziphathisa.
Oonobangela bakude baziswa yingqondo kwizenzo zayo kwimisebenzi yangaphambili yomzimba apho ingqondo yathatha inxaxheba ngokungaphezulu kunye nokuzonwabisa, kodwa kwimeko yokuvuselela umzimba bengazange bavune ukuvuna ababekuhlwayele, ngendlela efanayo abo bangamakhoboka abo Ukuziphatha okubi ngokwesondo kunye nokungalunganga ebomini kwangoku akunakuba kuvuna, kodwa kuyahlwayela, izizathu zesivuno sexesha elizayo-ngaphandle kokuba bamisela izizathu ezichasene nengcinga yangoku kunye nezenzo. Ngaphandle kokuba umhlaza udluliselwe ngokwasemzimbeni okanye utshintshiwe, onke amatyala omhlaza abangelwa yimbonakalo yekarmic; Oko kukuthi, babangelwa sisenzo kunye nokusebenzisana phakathi kwengqondo kunye nomnqweno kwicandelo lomzimba wenyama. Esi senzo phakathi kwengqondo kunye nomnqweno kufuneka senzeke kubomi bangoku okanye kubomi bangaphambili. Ukuba sele yenzekile kobu bomi beli xesha, iyakwamkelwa njengonobangela okhawulezileyo womhlaza xa ingqalelo ibhekiswa kuyo. Ukuba akukho nanye yezi zinto okanye ezinye ezifanayo ezibekiweyo kubomi beli xesha, ngokuvela komhlaza, eso sifo kungenxa yesizathu esikude esingaqatshelwa. Umntu unokwenza into ngokuchasene nomthetho okwethutyana, kuphela, kodwa ukhangelwe ngexesha. Iseli yomhlaza kunye nokukhula kwayo kungatshatyalaliswa, kodwa intsholongwane yomhlaza ayisiyokomzimba kwaye ayinakutshabalalisa nangayiphi na indlela yokwenyama. Intsholongwane yomhlaza yi-astral kwaye ikwimo ekhula iseli kwaye ikhule kuyo, nangona iseli yomhlaza ibonisa uhlobo lwentsholongwane yomhlaza. Iseli yomhlaza kunye nentsholongwane inokunyangwa kwaye iguqulwe ngeendlela zomzimba.
Kukho unyango lokunyanga umhlaza, kwaye unyango luye lwenziwa. Unyango luye lwenziwa unyango lweSalbbury. Olu nyango lusaziwa ngaphezulu kweminyaka engamashumi amane, kodwa bambalwa oogqirha abazamile. Unyango lweSalbbury lwezifo alufumananga fundo ngalobugqirha. Abambalwa abazame ngokufanelekileyo, baneziphumo ezihle kunyango uninzi lwezifo ezinokuthi zinganyangeki. Isiseko sonyango lweSalbbury kukutya kwenyama ebilisiwe eyenziwe kakuhle enamafutha esisusa apho kususwe onke amanqatha kunye nefibre kunye nezicubu ezinokusetyenziswa, kwaye ukutya oku kuhamba nesiselo samanzi ashushu kungabi ngaphantsi kweyure enesiqingatha ngaphambi nasemva kokutya . Olu nyango lulula kakhulu kwaye alubizi kakhulu kubagqirha abaninzi. Nangona kunjalo olu nyango, xa lufakelwe isazela, lubetha ezingcanjini, kwaye luchaphazele phantse sonke isifo esaziwayo. Inyama ebilisiwe ephekiweyo, apho kususelwe khona izicubu namafutha, kwaye amanzi abonelela ngezinto ezilula nezona zibaluleke kakhulu kulondolozo lwemizimba yezilwanyana esempilweni. Ukutya inyama ebomvu kunye nokusela amanzi amsulwa kuchaphazela umzimba wenyama kunye nehlakani layo le-astral, umzimba wefom. Inyama ekrwada ayizukubonelela ngezinto ezifanelekileyo ekukhuleni nasekuphuhlisweni kwayo nayiphi na intsholongwane enokuthi ibangele isifo emzimbeni apho inyama ethe tyhefu ithathwa. Xa ukufumaneka kokutya kuthintelwe sisifo kwaye oko kuthathwa emzimbeni kungasetyenziswa sisifo, kodwa kuyimpilo emzimbeni, isifo siyafa. Ke xa inyama yenkomhla ithathwa emzimbeni, ayizukubonelela ngokutya okuthandayo kumhlaza okanye ezinye izifo, kwaye ukuba okunye ukutya kuyabanjwa, ukukhula okungekho sempilweni emzimbeni kuyafa ngokuthe ngcembe kwaye kuphele ngenkqubo yendlala. Oku kunokuthatha iminyaka kwaye umzimba unokubonakala uphelelwe ngumzimba kwaye uzive ubuthathaka kwaye uphelelwe ngumzimba. Le meko yenzeka ngenxa yokuncipha kwenxalenye yomzimba egulayo, kodwa ukuba unyango luyaphikelela emzimbeni luya kuphinda lube sempilweni. Okwenzekayo ngexesha lenkqubo kukuba umzimba okhulileyo ogulayo uya kuvunyelwa ngokuthe ngcembe ukuba ufe kwaye upheliswe, kwaye endaweni yawo kukhule kwaye kuphuhliswe kancinci, omnye umzimba wokwakha owakhelwe kwinyama ebambekayo. Ukusela amanzi abilisiweyo athathwe kushushu iyure enesiqingatha ngaphambi nasemva kokutya kubalulekile njengokutya kwenyama, kwaye inyama akufuneki ityiwe ukuze kunyangwe isifo ngaphandle kokusela amanzi ashushu kwaye ngamaxesha achaziweyo. Ukusela kwenani lamanzi ashushu kwenza i-asidi kunye nemeko eyenzakalisayo kwaye idlule emzimbeni, kwaye emanzini ukuba lo mbandela udlulile emzimbeni. Inyama kukutya komzimba; amanzi ayankcenkcesha kwaye acoca nomzimba. Inyama ebusayo yakha iiseli zomzimba ezisempilweni, kodwa inyama ayinakuchukumisa okanye ichaphazele ngqo intsholongwane yomhlaza engabonakaliyo. Amanzi ashushu enza oku. Amanzi ashushu ayachaphazela kwaye atshintshe intsholongwane yomhlaza kunye nezinye iintsholongwane emzimbeni kwaye aziguqule ngokweemfuno zomzimba.
Umzimba owakhelwe kwesi siseko ucocekile kwaye ulungile kwaye sisixhobo esihle sokusebenza kwengqondo. Ngonyango olunje ayisiyomzimba yomzimba kunye ne-astral etshintshileyo kwaye yenziwa sempilweni, kodwa iminqweno nayo iyakuchaphazeleka, incitshiswe kwaye iqeqeshwe. Unyango lweSalbbury lwezifo lujongana ngqo nomzimba wenyama okwintsholongwane yomhlaza kunye nomzimba we-astral osisihlalo sentsholongwane yomhlaza. Ngonyango lweSalbbury ingqondo nayo iqeqeshiwe, ngokungathanga ngqo, kuba ukumisela okubonakalayo kwaye kuya kufuneka kwenziwe ngengqondo ukuze ibambe umzimba kwaye inqwenele ngokungaphaya unyango. Uninzi lusilela kunyango kuba alizukubambelela kulo nangenxa yokungoneliseki kwengqondo kunye nemvukelo ehlala ivela kwabo bayizamayo nabangenakoyoyisa. Ukuba imvukelo iyapheliswa kwaye ukungoneliseki kuthathelwe indawo sisigulana kunye nokuzithemba kwengqondo, ngokuqinisekileyo kuya kunyangwa. Ngokuqeqesha umzimba ngokweendlela ezifanelekileyo, ingqondo iyafundiswa ngokwayo ngokusebenza kwaye ifunde ukuqhuba kungekuphela komzimba kodwa kunye nokungaxabisi kwayo kunye nokungabi nalutho. Xa kukho unxibelelwano oluhambelana phakathi komzimba kunye nesifo sengqondo sinokufumana ikhaya kuloo mzimba. Intsholongwane yomhlaza kunye neseli ayizukubangela isifo ngaphandle kokuba umgaqo-siseko womzimba awukwazi ukuzisebenzisa. Zininzi iintsholongwane zomhlaza kunye neeseli phantse kuwo wonke umzimba womntu. Ngapha kwamashumi amawaka eentsholongwane ziyagcwala emzimbeni womntu. Nasiphi na kwezi iya kubangela izifo ezinentsholongwane ukuba imeko yomzimba ayifani nokugcina iintsholongwane zilungelelaniswe kwaye zigcina umzimba ulungelelaniswe kakuhle. Iintsholongwane zezifo ezingekaziwa teem emzimbeni, kodwa umzimba nengqondo azikayinikezeli iimeko ezizakwenza ukuba ezi ntsholongwane zaziwe emhlabeni njengezifo ezizodwa. Banokungqinela ubungqina ngalo naliphi na ixesha xa ingqondo iba nolwazi ngesifo esinokwenzeka, kwaye imeko ye-pathological ibonelelwa ngokutya okungalunganga kunye nokuphila.
Intsholongwane yomhlaza kunye neeseli zexesha elikwimbali kunye nokukhula komntu xa umzimba womntu wawushiyeka ngokwesondo. Ngeli xesha bekuya kuba akunakwenzeka ukuba isifo ngoku sibizwa ngokuba ngumhlaza kuba yayiyiseli eliqhelekileyo elisetyenziswa ekwakheni imizimba. Ugqatso lwethu ngoku lufikelele kwinqanaba lokuvela kwayo oluzisa kwindiza efanayo naleyo ugqatso lugqibele kulo, oko kukuthi, inqwelomoya ekwenzeka kuyo ukuqalwa okanye ukukhula kwamadoda abelana ngesondo ngamalungu omzimba Imizimba eyabelana ngesondo nemizimba yabasetyhini ngoku siyayazi.
Umzimba wokwakheka uyakhiwa kwaye ugcinwa yindalo engapheliyo kunye nokutshatyalaliswa kweentsholongwane. Yimfazwe yeentsholongwane. Umzimba usekwe ngokohlobo oluthile lukarhulumente. Ukuba igcina uhlobo lukarhulumente igcina ucwangco kunye nempilo. Ukuba ucwangco alugcinwanga, amaqela aphikisayo angena kurhulumente abangele ukuphazamiseka, ukuba awubangeli uguquko okanye ukufa. Umzimba awukwazi ukuhlala ungasebenzi okanye uhleli nje. Imikhosi yeentsholongwane eyakha umzimba kunye neminye imikhosi yeentsholongwane eziyikhusela ekuhlaselweni nasekuhlaselweni ziintsholongwane ezichasayo kufuneka zikwazi ukubamba abahlaseli. Oku kwenziwa xa umzimba utya ukutya okuyimpilo, iziselo zamanzi amsulwa, uphefumla ngokungenisa umoya omtsha, kwaye umntu unika iingcinga ezisempilweni kwaye uzama ukucinga ngeempembelelo kunye nezenzo ngokweenjongo ezilungileyo.